सिनेमा–टुरिजमः फिल्मले चिनाउँछ गन्तव्य – Pokhara Tourism Council
Home > News/Events > सिनेमा–टुरिजमः फिल्मले चिनाउँछ गन्तव्य
सिनेमा–टुरिजमः फिल्मले चिनाउँछ गन्तव्य
कास्कीको पर्यटकीय गाउँ घान्द्रुकमा भएको फिल्म र पर्यटन सम्बन्धि छलफल । तस्बिरः नागरिक
सुदर्शन थापाले निर्देशन गरेको पहिलो फिल्म थियो ‘मेरो एउटा साथी छ’ । दशकअघिको त्यो फिल्ममा थापाले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रभित्रको पर्यटकीय गाउँ घान्द्रुकलाई पनि अटाएका थिए । थापाको फिल्ममा घान्द्रुक अट्नुको कारण थियो–घान्द्रुक पर्यटकीय गाउँ हो । पर्यटनले चिनिएको घान्द्रुकसँग फरक संस्कृति र सुन्दरता छ । त्यही सुन्दरतासँग लोभिएका उनले फिल्मको गीतमा घान्द्रुकलाई समेटेका थिए ।
घान्द्रुक साच्चैको पर्यटकीय गाउँ हो । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) को संरक्षित क्षेत्रभित्रको यो गाउँ अन्नपूर्ण आधारशिविर (एबिसी) पदमार्गको प्रवेशद्वार पनि हो । त्यही घान्द्रुकसँग आफ्नै कला, संस्कृति, रहनसहज र सुन्दरता छ । त्यसबाहेक त्यहाँबाट देखिने माछापुच्छे«, र अन्नपूर्ण रेञ्जको दृष्यले त घान्द्रुक पुगेका सबैलाई मोहित तुल्याउँछ ।
पर्यटनले पहिचान कमाएको घान्द्रुकलाई फिल्मकर्मीले प्राकृतिक स्टुडियो नै मान्छन् । त्यही प्राकृतिक स्टुडियो घान्द्रुकमा अहिलेसम्म धेरैवटा फिल्म छायांकन पनि भइसकेका छन् । गीतमा त घान्द्रुक धेरैवटामा अटेको छ । पर्यटनमा अब्बल पहिचान बनाएको घान्द्रुक धेरैवटा फिल्ममा समेटिँदा त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्यटनमा पनि पर्ने फिल्मकर्मी र पर्यटन व्यवसायीको बुझाई छ ।
उनीहरु भन्छन्, ‘फिल्म र पर्यटनको एकअर्कासँग सम्बन्ध छ । फिल्ममार्फत पनि पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ ।’ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय फिल्मको फ्रेममा विशेषतः पोखरा र आसपासका क्षेत्र अटाएका छन् । आगामि दिनमा मुलुकका थप ग्रामीण क्षेत्रलाई प्राकृतिक स्टुडियोको रुपमा प्रयोग गर्दा पर्यटन र फिल्म दुवै क्षेत्रमा विकास हुने उनीहरुको बुझाई छ ।
फिल्म र पर्यटनको यही विषयमा छलफल गर्न पर्यटकीय क्षेत्र घान्द्रुकमा सरोकारवाला बहसमा पनि जुटेका छन् । फिल्म र पर्यटनको त्यो बहसको चाँजोपाँजो मिलाएको थियो चलचित्र पत्रकार संघ कास्कीले । ‘सिनेमा टुरिजमः सम्बन्ध र सम्भावना’बारे घान्द्रुकमा मंगलबार बहस गर्दै फिल्मकर्मी र पर्यटन व्यवसायीले पर्यटन र फिल्मको सम्बन्धबारे प्रस्ट्याउने प्रयास गरे ।
छलफलमा सहभागि थिए, फिल्म निर्देशक सुदर्शन थापा र पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष गोपी भट्टराई । थापा र भट्टराइलाई जोडेका थिए पत्रकार वासु मिश्रले । यो बेला कोरोना भाइरस संक्रमणले सबै क्षेत्रलाई ध्वस्त बनाउँदा पर्यटन र चलचित्र पनि जोगिन नसकेको वक्ताहरुको भनाई थियो । थापाले भने, ‘पर्यटन र सिनेमा एकदमै जोडिएको विषय हो । सिनेमा छायांकनका लागि विभिन्न ठाउँमा पुगिन्छ, ती ठाउँ पर्यटनमा अब्बल हुनसक्छन् । फिल्मले तिनै गाउँका सुन्दरता दर्शकसामु पस्किँदा त्यसको लाभ पर्यटनमा मिल्छ ।’
थापा फिल्म छायांकनकै लागि १२ वर्ष अघि घान्द्रुक उक्लेका थिए । फिल्म सुटिङका लागि नयाँपुलदेखि खच्चरमा सामान बोकाएर घान्द्रुक आएको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘सिनेमा मार्फत पनि पर्यटन उकास्न सकिन्छ । म त्यसबेला (१२ वर्ष अघि) र अहिले आउँदा घान्द्रुक धैरै नै बदलिएछ । केही हदसम्म टेलिफिल्मले पनि चिनायो घान्द्रुकलाई, त्यसबाहेक फिल्मको पनि केही योगदान त पक्कै छ । विकास निर्माण पनि निकै नै उकासिएछ ।’
थापाका अनुसार आधादर्जन हाराहारी फिल्ममा घान्द्रुक समेटिएको छ । उनका अनुसार ‘सेतो सुर्य’ पनि घान्द्रुकमा छायांकन भएको थियो । शिशिर राणाको निर्देशनमा बनेको ‘तिमी सँग’ भन्ने पनि फिल्म घान्द्रुकमा छायांकन भएको थियो । यो फिल्मको कथाबस्तु त झनै पर्यटनसँग सम्बन्धि थियो । टुरिष्ट गाइडको प्रेमकथामा फिल्म आधारित थियो ।
पर्यटकीय गाउँ घान्द्रुक । तस्बिरः नागरिक
सिनेमा र गीतसंगीतले पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा कुनैपनि ठाउँ विशेषलाई चिनाउन सघाएपनि त्यसको विकास निर्माणमा सहयोग गरि नै हाल्ने भने नहुने निर्देशक थापाको मत छ । उनले भने, ‘मुस्ताङमा सुटिङ गर्दा ‘के यो माया हो ? फिल्म खिच्यौं तर त्यसमा भूगोलको चर्चा भएन । पछि त्यहीँ प्रेम गीत खिच्यौं । घाँसादेखि मुस्ताङसम्मको क्षेत्रलाई स्टोरीमा बाँधेर देखाउँदा स्थानीयको प्रतिक्रिया राम्रो पायौं । फिल्म हेरकै भरुमा आन्तरिक पर्यटन पुग्दा अझ राम्रो सुनियो । गाउँठाउँ, भेषभूषा, कल्चरलाई देखाउन सक्यौं भने रुचिका साथ दर्शकले हेर्न पाउँछन् ।’
बहसमा सहभागि पर्यटन व्यवसायी भट्टराईले पनि फिल्मको माध्यमबाट पर्यटनको पनि प्रवद्र्धन हुने बताए । उनले भने, ‘सिनेमाको माध्यमबाट विश्वका धेरै ठाउँहरु पर्यटकीय हव बनेका छन् । सिनेमाबाट पोखरा आसपासका क्षेत्रले पहिचान बटुलेका छन् । अहिले पर्यटन संस्थाहरु अस्ताएको हो कि भन्ने लाग्छ । त्यसमासमन्वय जरुरी छ ।’ पर्यटन सम्बद्ध संस्थाहरुको सहयोग सिनेमा क्षेत्रलाई पर्याप्त नभएको पो हो की ? पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष भन्छन्, ‘माया त गरेकै छौं तर समन्वय नभएको चाहिँ हो । विगतमा भएको कमजोरी भन्दा पनि आगामी दिनमा राम्रो गर्दै जाने हो ।’
उक्त प्रसंगमा निर्देशक थापाको मत केही फरक थियो । उनले भने, ‘कुनै ठाउँलाई सिनेमाले पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्यो भने पनि धन्यवाद पाएनौं । हामी पनि छायांकन सकेर त्यो ठाउँसँग दोहो¥याएर सम्बन्ध राखेनौं । स्थानीयस्तरमा त धेरथोर होला तर सम्बद्ध निकायसँग छैन ।’
घान्द्रुकका व्यवसायी पनि पर्यटन र सिनेमाको सम्बन्ध रहेको स्वीकार्छन । ‘घान्द्रुकलाइ चिनाउन फिल्मको पनि भूमिका छ, घान्द्रुक पर्यटकीय गाउँ बाहेक फिल्मकर्मीका लागि प्राकृतिक स्टुडियो पनि हो,’ घान्द्रुक पर्यटन व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष किसम गुरुङले भने, ‘घान्द्रुक धेरैवटा फिल्ममा समेटिएको छ । फिल्ममा देखेकै भरमा सुन्दर गाउँ पछ्याउँने पर्यटक पनि हुन्छन् ।’
प्रकाशित: १३ माघ २०७७ १७:११ मंगलबार
‘साहित्यमाथि सिनेमा बनेन्, बन्न पनि सकेनन्’
कास्कीको पर्यटकीय गाउँ घान्द्रुकमा साहित्य र सिनेमासम्बन्धि छलफल । तस्बिरः नागरिक
१३ माघ २०७७ ३ मिनेट पाठ
नेपाली सिनेमा साहित्यमा आधारित छन् । साहित्यीक कृतिमाथि सिनेमा बनाइएको छ । पुराना होस या नयाँ सबैखाले साहित्यीक कृतिमा सिनेमा बन्ने गरेका छन् । पुस्ताले अत्यधिक रुचाइएको उपन्यास ‘समर लभ’ माथि सिनेमा बनेको छ । यसअघि कृतिहरु सेतो बाघ, वसन्ती, झोला जस्ता कृतिमा आधारित रहेर सिनेमा बनेको इतिहास छ ।
कृतिले समाजको परिवेशलाई झल्काएको हुन्छ । कालखण्डलाई कृतिमार्फत वर्णन गरिएको हुन्छ । कुनै कृतिले समसामयिक परिवेशलाई चित्रित गरेको हुन्छ । कृतिमा सिनेमा निर्माण हुँदा साहित्यसँगको सम्बन्धलाई जोडिदिएको छ ।
कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकास्थित सुन्दर घान्द्रुक गाउँमा चलचित्र पत्रकार संघ नेपाल, कास्की शाखाको आयोजनामा ‘सिनेमा संवाद एट घान्द्रुक कार्यक्रम’मा दोस्रो तथा अन्तिम सेसन ‘सिनेमा साहित्यः सम्बन्ध र साझेदारी’ विषयमा छलफल गरिएको थियो । सत्रमा कलाकार दीपकराज गिरी, लेखक गनेश पौडेल, कवि भूषिता वशिष्ठ र दिनेश डिसीले सहजीकरण गरेका थिए । सहजकर्ता डिसीले साहित्यीक कृतिमाथि बनेका फिल्महरुको समीक्षा अनुभवबारे गरेको प्रश्नलाई कवि भूषिताले सिनेमाको संवादमा मौलिकता हुनुपर्नेमा जोड दिईन् ।
कलाकार दीपकराज गिरीले लेख्ने र बोल्ने चिज दुवै फरक भएको बताए । ‘व्यावहारिक जीवनसँग जोडिने संवादले सिनेमामा दर्शकलाई जोड्छ । साहित्यबाट सिनेमा रुपान्तरित हुन्छ जब सहजता अनिवार्य रुपमा हुनैपर्ने हुन्छ,’ उनको भनाई थियो । साहित्यमाथि सिनेमा पर्याप्त मात्रामा नबन्नुको कारण सिनेमाकर्मी दर्शकसँग डराएको कलाकार गिरीको अनुभव सुनाए । उनले भने, ‘लेखिने र बोलिनेमा फरक हुन्छ नै । जटिलता हुने कारणले गर्दा पनि होला नेपालमा साहित्यमाथि सिनेमा बनेन्, बन्न पनि सकेका छैनन् ।’
लेखक गनेस पौडेलले पञ्चायती व्यवस्थाको ह्याङओभर अझै पनि नेपाली सिनेमाबाट उत्रिन नसकेको जिकिर गरे । ‘पञ्चायतमा राजा महेन्द्रले नेपाली सिनेमामा प्रयोग गरिने संवादलाई शुद्धिकरण गर्न र भाषिक एकीकरण गर्नका लागि पात्रले बोल्ने संवाद मौलिक लागेनन् । त्यसको ह्याङओभर अझै बाँकी छ । सिनेमा कला हो भाषा होइन,’ उनले भने । आफ्नो परम्परा र संस्कृतिलाई घुसाएर हरेक प्रकारका कला सिनेमामा देखाउन सकिने उनले बताए ।
बलिउड फिल्मको दृश्यलाई उल्लेख गर्दै कुनै भिलेनले हिरोलाई लखेट्दा होली मनाइरहेको दिन खेदेको देखाइने बताए । त्यसले परम्परा र संस्कृतिलाई पनि फिल्मको संवादसँगै चित्रण गरेको उनको भनाई थियो । कलाकार गिरीले भने एकाध बनेका चलचित्रलाई गनेर चलचित्र क्षेत्रको इतिहासलाई ५० वर्ष मान्न नहुने बताए । प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापना पछि नै नेपाली सिनेमाको उत्थान भएको हो । ३० वर्षको मात्र नेपाली सिनेमाले यात्रा पार गरेको उनको बुझाई छ ।
‘उपन्यासमा डायलग थोरै र विवरण धेरै हुन्छन् । सिनेमा दृश्य भाषामा बोल्नु पर्ने हुन्छ त्यसमा पनि सीमितता छ । अर्को बजेटले पनि प्रभाव पार्छ,’ कलाकार गिरीले भने, ‘मार्केटले भन्छ, दुईकरोड भन्दा माथि लग्यो भने डुब्यौं । एउटा भिलेनले हिरोलाई लखेटेको सिन देखाउनलाई होली सिनका लागि पाँचसय मान्छे जम्मा पार्न बजेटले नथेग्ने हुन्छ ।’ साहित्यसँग सिनेमाको साझेदारीको प्रश्नमा कवि भूषिताले सिनेमाकर्मी साहित्यकारसँग डराउन नहुने बताइन् ।
PTC pokharaLeaveaComment on सिनेमा–टुरिजमः फिल्मले चिनाउँछ गन्तव्य
Prev Postअन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा ‘बहुप्रवेश अनुमति’ को झञ्झट
Next Postपर्यटकको स्वागत गर्न आतुर छन् गण्डकीका पर्यटकीय स्थल
कोरोनाबाट सुरक्षित छौं भनी प्रचार गर्न सके पर्यटकको ओइरो लाग्छ